Maxkamadda ciidamada oo dil ku xukuntay rag loo heystay dilka gabar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil iyo xarig ku riday saddex eedeysane oo loo heystay iney dileen ama gacan ka geysteen dilka gabar ardayad ah 6-dii bishii April 2014, dilkaas oo ka dhacay xaafadda Coc-acola, degmada Yaakhshiid ee magaalada Muqdisho.
Saddexda eedeysane oo loo heystay iney geysteen dilkii gabar ardayad aheyd oo la oran jiray Nafiso Cusmaan Salaad ayaa kala ahaa labo nin iyo haweeney, waxaana labada nin lagu xukumay dil toogasho ah, halka haweeneyda lagu xukumay 10 sano oo xabsi ciidan ah.
Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, Col. Liibaan Yarow oo ku dhawaaqay xukunka ayaa yiri “Maxkamaddu waxey dil toogasho ah ku xukuntay: Xasan Maxamuud Cabdi iyo Shaafici Cabdi Xirsi, kadib markii ay ku cadaatay iney dileen Nafiso Cusmaan Salaad”.
“Sidoo kale, waxaa maxkamaddu 10 sano oo xarig ah ku riday haweeney lagu magacaabo Deeqo Dirac Cabdi, taasoo lagu helay iney ka tirsantahay Alshabaab, sidoo kale maxkamaddu waxey la wareegtay gaari NOAH ah oo ay wateen” ayuu sidoo kale yiri Liibaan Yarow.
Gudoomiye Liibaan Yarow ayaa sheegay in ciddii dood ka qabta xukunkaas uu racfaan u furanyahay.
Ragaan iyo haeeneyd la xukumay ayaa maalmo kadib markii la dilay gabadhaas waxaa soo bandhigay nabad-sugidda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.